एपीएलः टस हारेर सन्दिपको टिम बलिङ गर्दै, आज जित्नै पर्ने दबाब ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
एपीएलः टस हारेर सन्दिपको टिम बलिङ गर्दै, आज जित्नै पर्ने दबाब ! [LIVE]
काठमाडौं, असोज ३१ । यूएईमा जारी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (एपिएल) अन्तर्गत सन्दिप लामिछानेको टिम नगरहर लिओपार्डसले आज टस हारेर बलिङको निम्तो पाएको छ । आज (बुधबार) सन्दिपको टिमले बल्ख लेजेन्ड्ससँग खेल्दै छ ।
अघिल्लो खेलमा पक्तिया प्यान्थर्ससँग टिम भने ७ विकेटले पराजित हुन पुगेको नगरहरलाई सेमी-फाइनल पुग्न मोहम्मद नबि कप्तानीको बल्ख लेजेन्ड्स बिरुद्ध जित अत्यन्त आवस्यक रहेको छ।
सहभागी ५ टिम मध्ये ४ टिम सेमीफाइनल प्रवेश गर्ने हुँदा आजको खेल जिते नगरहरको सेमीफाइनल यात्राको सम्भावना बाँकी रहने छ। अंकतालिकाको चौथो स्थानमा रहेको नगरहरले ७ खेलमा २ जित र ५ हार बेहोरेको छ भने पाँचौ स्थानमा रहेको कन्दहारले भने ६ खेलमा १ जित र ५ हार बेहोरेको छ।
हिजोको खेलमा कन्दहर नाइट्ससंग अन्तिम ११ मा मौका नपाएका सन्दिप लामिछानेले दोश्रो खेलमा भने मौका पाएका थिए । पहिलो खेलमा शानदार प्रदर्शन गरेका सन्दीपले दोस्रो खेल खेल्न पाएका सन्दिपले आज भने स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण भारत लगायत दक्षिण एसियाली देशहरु मा डी-स्पोर्ट च्यानलले गरिरहेको छ। यस्तै फेसबुक पेजमा cricingif ले पनि खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेको छ।
ट्याग्स: APL, sandeep lamichhane